Soomaaliya oo la gudoonsiiyay 100,000 doolar (Maxaa lagu qabanayaa). | XAL DOON
Home NEWS Soomaaliya oo la gudoonsiiyay 100,000 doolar (Maxaa lagu qabanayaa).
Soomaaliya oo la gudoonsiiyay 100,000 doolar (Maxaa lagu qabanayaa).
Xoghayaha joogtada Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Danjire Maxamed Cali-Nuur Xaaji ayaa ka guddoomay jeeg ay ku qoran tahay 100,000 doolar Jamaal Axmed, oo sarkaal sare oo isku-xidhe ka ah Xafiiska IGAD ee Muqdisho.
Kaalmadaasi lacageed ayaa ah hindise iskuduubni oo ka timid shaqaalaha urur goboleedkaasi oo ay ku garab istaagayaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dagaalkeeda ka dhanka ah Karoona feyrus oo loo soo gaabiyo magaciisa COVID-19.